Nezvedu - QUANZHOU HOPE SHOE Co, Ltd.
Yakatangwa muna 2010, kambani yedu inyanzvi yekugadzira shangu. Kambani yedu iri muQuanzhou guta, Fujian mudunhu. Kubva pano isu tinopa R&D, Kugadzira, Logistics, Kutenga uye Kuronga Mabasa ekutsigira. Isu tine nyanzvi yekutengesa timu yekupa yakakwana uye yakasarudzika sevhisi, ichikugonesa iwe kuti ugadzire chero dhizaini raunoda uye kuburitsa chero shangu dzaunoda.
Kugadzira Kugona: 2,5- mamirioni maviri pamakumi maviri shangu shangu pagore
Kubuda kwegore rega: zvinopfuura mamirioni makumi maviri emamiriyoni uye inoramba ichikwira zvakanyanya
Nha. Yezvigadzirwa Lines: 3
Main Markets: North America, Europe, South America, Japan
Zvigadzirwa Zvikuru: shangu dzemitambo, shangu dzakasarudzika, shangu dzekunze uye bhutsu.
Vatengi Vanokosha: Skechers, Diadora, Gola, Kappa, nezvimwe.
Isu tinoita shangu dzinova zvedu vatengi kuda. Isu tinoziva musika, tevera zviitiko zvakanyanya uye tinokwanisa kupindura maitiro matsva nekukurumidza.
Shangu yega yega inotanga pabhodhi yekudhirowa yevanogadzira. Iyo dhizaini uye yakakodzera sampuro inotumirwa. Kugadzira kunotanga kana zvese zvese zvasangana nezvinodiwa nemutengi. Vatengi vazhinji vakatove nemanyowawo avo akagadzirwa seizvi. Ungade kutevera tsoka dzawo here?
Shangu Dzedu Dzinogadzirwa Yako Pundutso
Nokubatanidza mauto pamwe nesu, une mumwe wako anogona kukubatsira iwe kuti uwane yakakwirira kudzoka kubva kutengesa shangu. Semuenzaniso, makambani muindasitiri yemafashoni aive asati ave neshangu mumhando dzawo, asi aiziva mukana. Vakasvikira kwatiri nezano neruzivo kuti vawane nzwisiso yesarudzo, dzichivabvumidza kupinda munyika ino itsva yeshangu dzakanyatsogadzirirwa. Mune ruzivo rwedu - mune dzakawanda zviitiko, idzo dzekutanga nzira dzekuchenjerera dzakavandudzika kuva hurefu hwebhizinesi hukama hwakavakirwa pakuvimbana, ruzivo uye kusununguka.
Kuve Nemakore gumi Akasangana Mune Shangu Kukutengesa Uye Kugadzira.
Isu tanga tichigadzira uye kutumira shangu kubva gore ra2010. Kubva ipapo, mamirioni evarume akawana nzira yavo kuvarume, vakadzi nevana pasi rese. Isu tinogadzira shangu mune chero chimiro, chivara uye dhizaini inoshuvirwa nevatengi vedu. Zvigadzirwa zvedu ndezvekudyidzana zvakasikwa uye zvinogona kuteedzera REACH, CISIA uye mamwe mabvunzo evatengi kukumbira.
& KUTI uve parizvino
Kero:Nha. 618 Chonghong Street, Quanzhou Economic And Technologies Development Zone, Fujian Province.